I-China i-15 Khz ye-Ultrasonic ye-Welding ye-Welding Transducer kunye ne-Booster Horn Square Molding Manufacture kunye ne-Factory | Qianrong
I-15 Khz ye-Ultrasonic ye-Welding Generator Transducer kunye ne-Booster Horn Square Molding
Ukwahlulahlula QR-15K QR-20K
Rhoqo 15Khz 20Khz
Amandla 2600w 1500w
I-Voltage 220V 220V
Umvelisi Umvelisi wedijithali Umvelisi wedijithali
Izinto zophondo Intsimbi Intsimbi
Ubukhulu bophondo I-120 * 25mm 110 * 20mm
Ubunzima bomnatha uphondo 11kgs 5.5kgs
Ubungakanani bomvelisi 250 * 150 * 300mm 250 * 150 * 300mm
Ubunzima bomnatha wenkunkuma 6kgs 6kgs
Iphakheji Ityala leplanga Ityala leplanga
Ukusetyenziswa Non ephothiweyo imask ukuwelda Non ephothiweyo imask ukuwelda
Umatshini wokuthunga we-ultrasonic unokuthunga amalaphu amaninzi e-thermoplastic. Xa kuthelekiswa nenaliti eqhelekileyo kunye nokuthunga umsonto, ukuthunga i-ultrasonic akufuneki ngenaliti kunye nomsonto, amandla aphezulu okuthunga, ukutywina okuhle kunye nesantya sokuthunga ngokukhawuleza.
Iseti yomatshini we-Ultrasonic iseti yindibaniselwano ye-15Khz kunye ne-20Khz i-transducers ye-ultrasonic, iimpondo, iintloko ezikhethekileyo zentsimbi kunye nokuxhasa umbane okhethekileyo we-CNC. Umbane ombane olawulwa ngokwamanani uguqula umbane wedolophu ube ngama-20Khz amaza aphakamileyo kunye namandla ombane aphezulu e-AC kwaye awunike i-ultrasonic transducer. I-transducer ye-ultrasonic iguqula amandla ombane abe ngamandla oomatshini (i-ultrasonic). I-transducer ivelisa ubungakanani bayo xa isenza i-telescoping motion kwicala lobude, kwaye emva koko iyithumele kwintloko ye-welding ngophondo. Ngaloo ndlela, intloko ye-welding idibeneyo.
Xa kuthelekiswa nesuture yendabuko yenaliti, umthungo ongenamthungo we-ultrasonic ongenamthungo unezi zinto zilandelayo
1. Ukusebenzisa i-welding ye-ultrasonic, ukuphelisa isidingo senaliti kunye nentambo, ukuphelisa isidingo sokutshintshwa kweenaliti rhoqo, ngaphandle kwamalungu aphukileyo okuthunga intambo yendabuko, kunye nokusika ngokufanelekileyo nokutywina. Ukuthunga kukwadlala indima yokuhombisa. Amandla anamandla okuncamathela, anokufikelela kwisiphumo sokungena manzi, ukucacisa ngokucacileyo, ukuqaqamba okuyimpembelelo embusweni, isantya sokusebenza esikhawulezayo, ukusebenza kwemveliso elungileyo, amabanga aphezulu kunye amahle, umgangatho uqinisekisiwe.
2. Usebenziso lwevili lwentsimbi nolwenziweyo olukhethekileyo, imiphetho etywiniweyo ayizukuqhekeka, ayizukulimaza imiphetho yelaphu, kwaye akusayi kubakho burrs okanye curling.
3. Akukho kulungiswa kwangaphambili okufunekayo ngexesha lokwenziwa kunye nokusebenza okuqhubekayo kunokwenzeka.
4. Umsebenzi ulula, kwaye akukho mahluko mkhulu kwindlela yokusebenza komatshini wokuthunga, kwaye abasebenzi bokuthunga abaqhelekileyo banokuwusebenzisa.
5. Ixabiso eliphantsi, amaxesha ama-5 ukuya kwezi-6 ngokukhawuleza kunoomatshini bendabuko, kunye nokusebenza ngokukuko okuphezulu.
Egqithileyo Ukuphindaphindeka okuphezulu kwe-40Khz ukungcangcazela kwe-Ultrasonic yeRubber yokusika iBlade eneGenerator yeDijithali
Okulandelayo: I-20Khz 2000w ye-Ultrasonic Transducer Booster Assembly yeNdlebe yokuLungisa uMatshini